चलचित्रका लागि सेन्सर आवश्यक छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र २०, २०७४ - साप्ताहिक
अति आवश्यक छ । सेन्सरका कारण राम्रो र हेर्न योग्य चलचित्र छानिएर आउँछ । चलचित्रमा विकृति कम हुन्छ ?
- दिनेश काफ्ले, क्यारिकेचर कलाकार
सेन्सर बोर्डमा रहनेहरूको रोजगारीका लागि सत्ताको चाकरीका लागि मीठो भोजनका लागि फिल्म हलमा नआउँदै ‘सेन्सरमा लफडा’ भनेर फ्रीको प्रमोसनका लागि धेरै हटलाई कट गर्न चित्त नबुझेकालाई चट गर्न सेन्स नै नभए पनि सेन्सर त आवश्यक छ साथी ।
- राजा राजेन्द्र पोखरेल, अभिनेता
चलचित्रले देश तथा समाजमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएको हुँदा देशको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा कानुनी मर्यादाभन्दा बाहिर गै समाजमा गलत सन्देश प्रवाह नहोस् वा विकृति नफैलियोस् भन्नका निम्ति सेन्सरको आवश्यकता रहन्छ, तर सेन्सर बोर्डको रवैया एवं विचार समय सापेक्षिक हुनु जरुरी छ ।
अहिले इन्टरनेटको जमानामा किन चाहियो सेन्सर ?
- नवीन अधिकारी, निर्माता
विगतको समाज हेर्ने हो भने आवश्यक थियो, भविष्य र वर्तमानलाई मनन गर्ने हो भने खासै आवश्यक देखिँदैन, किनभने नयाँ पुस्ताले निकै आधुनिक विचार बोकेको हुन्छ । तैपनि आधुनिकताको नाममा विकृति भित्रिन्छ कि भनेर चिन्ता लिने हो भने चलचित्रमा सेन्सर आवश्यक देखिन्छ ।
- निशा सिग्देल, सञ्चारकर्मी
शरीरमा एपेन्डिक्स जति आवश्यक छ, त्यति नै ।
- रवीन्द्रसिंह बानियाँ, अभिनेता
आवश्यक छ, तर सेन्सरको मर्म बुझ्ने पदाधिकारी हुनुपर्‍यो ।
- प्रकाश सुवेदी, गीतकार
ननसेन्सहरूले चलचित्र बनाउन सक्छन्, त्यसलाई सेन्सवालाहरूले सेन्सर गर्नैपर्छ ।
- चेतन सापकोटा, संगीतकार
सेन्सर हुँदा त छाडापन घटेको छैन भने, नेताहरूजस्ता छाडा हुनेछन्, चलचित्रमेकरहरू पनि । कसैको केही डर पनि त हुनुपर्‍यो ।
- शिशिर राणा, निर्देशक
म त आवश्यक देख्छु । अनुशासनमा बस्नु नै राम्रो हुन्छ, तर त्यसमा पनि विविध चलखेल हुनु भएन । ग्रेडिङ छुट्याउने सेन्सरसिप आवश्यक छ ।
- उत्सव रसाइली, सञ्चारकर्मी
सेन्सर त हुनुपर्छ, अन्यथा परिवारसँग बसेर हेर्नै नहुने चलचित्र बनाउलान् नि फेरि ।
- निर्मल सेन्चुरी, अभिनेता
सेन्सरसिपले चलचित्र निर्माण गर्नेहरूमा जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन भन्ने धारणा बसाएको छ । त्यसैले आवश्यक छ ।
- जेविका कार्की, अभिनेत्री
युट्युबमा जस्तो पनि र जे पनि हेर्न पाइने जमानामा चलचित्र सेन्सर गरेर केही हुँदैन, मात्र ग्रेडिङ सिस्टम राम्रोसँग लागू गरेर अनुगमन गरिनुपर्छ ।
चलचित्रले भाषा, कला र संस्कृति दर्साउने काम गर्छ, त्यसैले त्यसमाथि नै ठाडो प्रश्न हुने गरी कसैले चलचित्र निर्माण गर्छ वा गरेको छ भने त्यसमा औंला ठड्याउने काम त हुनैपर्छ, तर अंकुश नै लगाउने गरी होइन ।
- धनकुमारी थापा सरु, लोकगायिका
जरुरी छ, किनभने चलचित्र भनेको परिवारसँग बसेर हेरिन्छ, युट्युबमा छाडा फिल्म हेर्नेहरूले त एक्लै लुकेर हेर्छन् नि । सेन्सरले चलचित्र निर्माणमा देखा पर्न सक्ने छाडापन नियन्त्रण गर्छ ।
- पृथक आचार्य, गायक
सेन्सर त आवश्यक छ, तर सेन्सरबोर्डमा चलचित्र बुझेका मानिसहरू सदस्य हुनुपर्छ । राजनैतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन ।
- भरत रेग्मी, चलचित्र सम्पादक